Isakhiwo esisisiseko se-US Federal Government
Urhulumente 101: Urhulumente wase-United States Government
Ukujonga kwiSakhiwo esiSeko sikaRhulumente saseMelika kunye neMisebenzi
Ungayenza njani urhulumente ukususela ekuqaleni? Isakhiwo seburhulumente waseUnited States ngumzekelo ogqityiweyo owanikela abantu-kunokuba "izifundo" -inelungelo lokukhetha iinkokeli zabo. Kwinkqubo, bazimisele inkqubo yesizwe esitsha.
OoBawo abakuqala u-Alexander Hamilton noJacob Madison bathi: "Ekuqulunqeni urhulumente oza kulawulwa ngamadoda phezu kwamadoda, ubunzima bunzima kule ndawo: kufuneka uqale uvumele urhulumente ukuba alawule ulawulo; uyayinyanzelisa ukuba ikwazi ukuzilawula. "
Ngenxa yolu, isiseko esisiseko abasunguli abasinike sona ngo-1787 senze iimbali zaseMelika kwaye sasiwusebenzela kakuhle isizwe. Yinkqubo yokuhlola kunye nezilinganiso, ezenziwe ngamasebe amathathu, kwaye zenzelwe ukuqinisekisa ukuba akukho nanye iqumrhu elinamandla amaninzi.
UPeter Carroll / Getty Izithombe
Isebe Elilawulayo likaRhulumente liholwa nguMongameli waseMerika . Usebenza njengenhloko yombutho kwiintsebenziswano zezobudlelwane kunye kunye noMlawuli-oyiNtloko kuwo onke amasebe ase-US amabutho.
UMongameli unembopheleleko yokufezekisa nokunyanzelisa imigaqo ebhalwe yiCongress . Ngaphezu koko, ubeka iintloko ze-arhente zentlangano, kuquka iKhabhinethi , ukuqinisekisa ukuba umthetho uyenziwa.
I- Vice-Mongameli iphinda ibe yinxalenye yeSebe eliLawulayo. Kumele ukuba alungele ukuthatha uongameli kufuneka kuvele imfuneko. Njengomnye olandelayo kumgca wokulandelelana, unokuba nguMongameli kufuneka umntu ofayo afe okanye angakwazi ukukhubazeka xa esesikhundleni okanye inkqubo engacatshulwayo yokuphambuka . Kaninzi "
Dan Thornberg / EyeEm / Getty Izithombe
Wonke umntu ufuna imithetho. EUnited States, amandla okwenza imithetho anikezelwa kwiCongress, emele isebe lezomthetho likarhulumente.
I-Congress ihlukaniswe ngamacandelo amabini: iNtloko yePhondo kunye neNdlu yabameli . Ngamanye akhiwa ngamalungu akhethwe kwiphondo ngalinye. I-Senate iqulethwe ngabaSebenzi ababini ngurhulumente kunye neNdlu isekelwe kubemi, inani elingama-435 amalungu.
Isakhiwo sezindlu zombini zeNgqungquthela kwakuyi -mpikiswano enkulu kwiNkomfa yoMgaqo-siseko . Ngokwahlula abameli ngokulinganayo kunye nokusekelwe kubukhulu, abaBawo abaQalayo bakwazi ukuqinisekisa ukuba urhulumente ngamnye unokuthetha ngurhulumente wesigqeba. Kaninzi "
Ifoto nguMike Kline (notkalvin) / Getty Izithombe
Imithetho yaseUnited States yinkcazo eyinkimbinkimbi eyenza imbali. Ngamanye amaxesha ayicacisekanga, ngamanye amaxesha athetha ngokucacileyo, yaye ahlala edideka. Kuye kwenkqubo yokugweba yomgaqo-nkqubo ukulungiselela uluhlu lwewebhu kwaye uthathe isigqibo malunga nomgaqo-siseko kunye nento engekho.
Isebe lezomthetho lenziwe yiNkundla ePhakamileyo ye-United States (SCOTUS). Yenziwe ngamalungu alithoba, kunye nesimo esiphezulu esinikezelwa sisihloko seJaji eliyiNtloko yaseMerika .
Amalungu eNkundla ePhakamileyo aphakanyiswe nguMongameli wangoku xa isithuba sithuba siyafumaneka. I-Senate imele ivume umntu otyunjelwe ngabavoti abaninzi. IJaji ngalinye lijongene nokuqeshwa komntu wonke, nangona bangasula phantsi okanye bangaphunyezwa.
Nangona i-SCOTUS yinkantolo ephakamileyo e-US, igosa lezogwebo likwabandakanya inkundla ezantsi. Inkqubo yenkundla yenkundla yonke ibizwa ngokuthi "abagcini bomgaqo-siseko" kwaye ihlukaniswe kwizithili ezilishumi elinesigqeba, okanye "iisekethe." Ukuba ityala lijongelwa umngeni ngaphaya kwenkundla yesithili, liya kwiNkundla Ephakamileyo kwisigqibo sokugqibela. Kaninzi "
I-Federalism e-United States
jamesbenet / Getty Izithombe
Umgaqo-siseko wase-United States ubeka urhulumente ngokusekelwe kwi-"federalalism". Oku kukwabelana ngamandla phakathi koorhulumente karhulumente kunye noluntu (kunye noluntu).
Ifom ekwabelwana ngamandla karhulumente iyaphambene noorhulumente "baseburhulumenteni", apho urhulumente wesizwe ugcina amandla onke. Kulo, amandla athile anikezelwa kummandla ukuba akusiyo umbandela wokukhathazeka ngokubanzi kuluntu.
Uhlengahlengiso lwesi-10 kuMgaqo-siseko uchaza isakhiwo se-federalist. Ezinye izenzo, ezifana nokushicilela imali kunye nokuvakalisa imfazwe, ziphela kuphela kurhulumente wephondo. Abanye, njengokwenza ukhetho kunye nokukhupha iilayisenisi zomtshato, zixanduva lomntu ngamnye. Zomabini amanqanaba angenza izinto ezinjengokuseka iinkundla kunye nokuqokelela irhafu.
Inkqubo ye-federalist ivumela amazwe ukuba asebenzele abantu bawo. Yenzelwe ukuqinisekisa amalungelo karhulumente kwaye ayiveli ngaphandle kweengxabano. Kaninzi "
IMithetho yePhilippines ye-Senate yase-US
Ukuphakama kobuNtu kunye noMgaqo-siseko njengoMthetho woMhlaba
Indlela uParry Ryan abe Ngumlomo weNdlu
Izizathu ezi-5 zamaMerika zizonda iCongress
Indlela i-HUD yokuKhuselwa kweNkundla yokuKhusela ukuKhusela iKhuselo iVikela abaThengi baseKhaya
Iqhosha le fa
Rebis From Theoria Philosophiae Hermeticae
IMfazwe yaseVietnam: jikelele uWilliam Westmoreland
Abalawuli baseChang Dynasty baseChina
Imfazwe Yehlabathi II: Supermarine Spitfire
Yayiyintoni isivumelwano se-Adams-Onis?
Zonke Izinto Zisebenza Ngokulungileyo-Roma 8:28
Inkcazo yeCandelo lokuThuthukisa iMifanekiso "Vula iPro"
Indlela yokugubha iSuku lweValentines njengeHomeschool Family
I-Amateur vs. Umculi wezobugcisa: Imibuzo 7 yokuzibuza
Ngaba uDaisy Inja yeHero ye-9/11?
Ulungelelwano oluqhubekayo lwe-Electrochemical Cell Reaction
Rucker Park - IYankee Stadium yeStatballball
Yiba ngumzingeli onobuhlobo
Ukufunda Ukukhetha Kukhuthaza Ubunini Babafundi
Yintoni iBaluster? Yintoni i-Balustrade?
Ingabe iintlawulo zithengiswa ngakumbi kwiiNtlawulo eziNinzi kuneMali yeNgeniso?
IiHogs kunye namaPig
I-Islamic Clothing Stores Online